प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माथि आइजीपीको भरोसा! “दवाब हिजो पनि स्विकरेनौ, आज पनि स्वीकार्दैनौ- आइजीपी खनाल – Etajakhabar
महानिरीक्षक बन्ने सपना पूरा हुँदा कस्तो लागिरहेको छ ? जिम्मेवारी थपिएको महसूस भएको छ । यसलाई नेपाल प्रहरीलाई उत्कृष्ट बनाउने अवसर ठानेको छु । प्रहरी यस्तो हुनुप¥यो भन्ने आमअपेक्षा पूरा गर्न सकिने जिम्मेवारी पाउँदा खुशी छु ।
‘राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनलाई बर्बाद पार्‍यो’ भनिन्छ, त्यसबाट प्रहरी संगठनलाई कसरी मुक्त गर्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कुनैखाले हस्तक्षेप हुँदैन भन्नुभएको छ । अहिलेको वातावरण पनि आशा र भरोसायुक्त छ । प्रहरीले दृढसंकल्पित भएर काम गर्दा कुनै हस्तक्षेप होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । केही दबाब हिजो पनि आएकै हुन्, त्यसलाई हिजो पनि स्वीकारेनौं, आज पनि स्वीकार्दैनौं ।
तर, आईजीपी नियुक्तिमै राजनीतिक चलखेल तीव्र देखियो । तपाईं स्वयं पनि त्यसको पात्र बन्नुभयो ? सक्षम र क्षमतावान् अधिकृत नेताकहाँ धाउनु राम्रो होइन, तर धाउनु नपर्ने गरी काम गर्ने प्रणाली नै भएन । हिजो जे भयो, भयो अब प्रहरी बल आफैं अर्डरमा बस्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्छ । मूल्यांकन कसैको कृपामा नभई कामको आधारमा हुने प्रणाली स्थापना गर्न विशेष पहल गर्नेछु । हिमालखबरमा खबर छ ।
मुलुकसँगै प्रहरी पनि संघीय संरचनामा जाँदैछ । संगठनको अबको संरचना कस्तो हुनेछ ? भर्खरै पदबहाली गरेको छु । संघीय संरचनामा केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कस्तो बनाउने भन्ने खाका मैले बनाएको छु । त्यसअनुरुप प्रहरी संरचना तय गर्न पहल गर्नेछु ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख ०२, २०७५ समय: १९:११:२८